Fitakian’ny mpiasan’ny CNAPMAD Ahiana hiantraika amin’ny laza adina CEPE…
“Andriamatoa Filoha hajaina, vonjeo fa mijaly izahay: karama, OSTIE, CNaPS ! Misaotra Tompoko”, hoy ny antso avo nataon’ireo mpiasan’ny CNAPMAD (Centre National de Production de Matériel Didactique) manana foibeny eny Ankorondrano.
Tsy azo ekena hiseho lany sy hahazo faka eto amin’ny ny firenena, hoy izy ireo, ny gaboraraka sy ny fanaovana tsy marina, anisan’ireny ny tsy fahaiza-mitantana sy fanodinkodinana volam-bahoaka satria fanetribem-pirenena izany. Tsapa ny ezaka ataon’ny mpitantana vonjimaika ny MENETP na minisiteran’ny fanabeazana ankehitriny, izay ministera goavana sy tena saro-pady tokoa. Tsy azo hamaivanina kosa anefa ireo olana maro samihafa mila famahana, ireo ezaka fanatsarana takian’ny vanim-potoana ao amin’ny MESUPRES na minisiteran’ny fampianarana ambony, araka ny efa nifampiresahan’ny SECES sy ny fitondram-panjakana mba tsy hisian’ny olana miverimberina intsony eny amin’ny anjerimanontolom-panjakana sy ireo foibem-pikarohana nasionaly. Mifampiankina amin’izany ny fahahafahan’izy ireo manome fiofanana matotra sy mendrika ny zana-bahoaka mandranto fianarana eny sy mitondra ny anjara biriky hampandrosoana ny firenena amin’ny alalan’ny fikarohana avo lenta. Manainga ny fitondram-panjakana mahefa mba hanendry haingana izay ho Minisitra vaovao hitantana ny minisiteran’ny fanabeazam-pirenena, hoy hatrany ny SECES, sampana Antananarivo.
Legende : Ny filohan’ny Seces, sampana Antananarivo, Sammy Gregoire Ravelonirina